warkii.com » Rhea Chakraborty oo afka furatay iyadoo ooyneysa muuqaalna iska soo duubtay dhinacna iska marisay eedeynta inee dishay Sushant Singh!!
Rhea Chakraborty oo afka furatay iyadoo ooyneysa muuqaalna iska soo duubtay dhinacna iska marisay eedeynta inee dishay Sushant Singh!!
Atiriishada caanka noqotay Rhea Chakraborty ayaa muuqaal iska soo duubtay kagana hadashay eedeymaha kaga imaanayaan dhanka qoyska Sushant Singh Rajput waxayna sheegtay inee waxaas waxba ka jirin dambi cadna dusha laga saaray.
Inkastoo hinduuga badankiisa rumeysneen hadalka Rhea hadana waxay wacad ku martay inee is difaaci doonto cadaaladna heli doonto waana muuqaal shalay si weyn u qabsaday baraha bulshada xili ay ooyneysay.
Rhea waxay tiri iyadoo hadleysa,”Waxaan horey u codsaday hadana codsanaa in kiiska Sushant loo gudbiyo waaxda dambi baarista ugu weyn dalka (CBI) si qof walba runta ugu cadaato Sushant-na cadaaladiisa u helo dhanka kale aniga mudo badan waan iska aamusnaa eedeymo badan iyo aflaado xitaa hanjabaad nafteyda loogu soo dhigtay wey isoo martay.”
“Intaaso dhan waan iska aamusnaa oo qareenkeyga ayaa igulla taliyay inaan wax jawaab ah ka bixin waxaanse idiin sheegaa inee runta banaanka imaan doonto anigana cadaalad waan heli doonaa hubaal waaye midaas.”
Rhea waxaa soo dacweyee qoyska Sushant oo ku eedeyeen in geerida wiilkooda iyada sabab u tahay hanti badana ka dhacday dhanka kale wararka waxay sheegen In gabadhaa qabsatay qareen ama abuukaataha ugu sareeya Mumbai si uu u difaaco runtana inee banaanka timaado waa lawada sugayaa.